Wararka - Intee in le'eg ayuu leeyahay awoodda suuqyada buugaagta carruurtu?
Sina Education waxay sii daysay "2017 Warqadda Cad ee ku saabsan Isticmaalka Qoyska Shiinaha ee Waxbarashada Qoyska" (hadda kadib loo yaqaan "Waraaqda Cad") maalmo ka hor. "Waraaqda Cad" waxay muujineysaa in saamiga isticmaalka aqalada uu sii kordhayo. In ka badan 50% waalidiinta ayaa rumeysan in waxbarashada carruurtoodu ay ka muhiimsan tahay kharashaadka kale ee qoyska. Si carruurtoodu u helaan mustaqbal wanaagsan, waalidiintu waxay bilaabeen inay waqti badan, tamar iyo lacagba geliyaan waxbarashada hore inta ay carruurnimada yihiin. Maaddaama ay tahay mid ka mid ah hababka tooska ah ee waxbarashada carruurta, carruurta akhriska buugaagta waxay noqdeen suuq kulul oo leh awood horumarineed oo weyn.
Akhriska warqaddu wuxuu kobciyaa u fiirsashada iyo fikirka
Sanadihii la soo dhaafay, wax badan oo ka mid ah "dhimista akhrinta waraaqaha" ayaa ku wareegayay internetka, waxaana la rumeysan yahay in saameynta uu ku leeyahay akhriska elektarooniga ah, akhriska warqaddu uu gebi ahaanba ka laaban doono aagga akhriska aadanaha. Laakiin tani run ahaantii waa kiiska? Tan iyo horumarintii akhriska e-akhriska, in kasta oo akhriska ku saleysan warqadda uu sababay dhibaato badan illaa xad, haddana akhriska ku saleysan warqadda ma dhiman doono, maxaa yeelay akhriska warqadda ku saleysan wuxuu leeyahay faa iidooyin badan oo aan lagu beddeli karin akhris elektaroonig ah.
Akhrinta waraaqaha waxaa loola jeedaa habka akhriska oo u adeegsada warqad ahaan xambaarsan, taas oo ka duwan akhriska elektarooniga. Waxay leedahay qiimo gaar ah waxayna dadka siisaa khibrad aan la qiyaasi karin. Waxaa lagu soo warramey in khibrada shucuurta aadanaha ay gaari karto meeshii ugu sarreysay ee habka akhriska warqadda. Marka la barbardhigo akhriska dhijitaalka ah, akhrinta warqadaha dhaqameed waxay si gaar ah diiradda u saartaa macnaha "akhriska" lafteeda, taasoo u oggolaanaysa akhristayaasha inay si deggan u akhriyaan, si ay u helaan faham qoto dheer oo aqoonta ah, runtiina la kulmaan quruxda suugaanta, oo ay la kulmaan soo jiidashada gaarka ah ee farshaxanka luqadda. .
Akhrisku ma aha fal fudud oo akhris ah. Waxay leedahay feejignaan, fikir, iyo walxo kala duwan. In kasta oo ay ku hoos jiraan saamaynta teknolojiyada elektaroonigga ah, kuwa sidaha bini'aadamka u ah akhriska waxay mari doonaan is-beddello waaweyn, laakiin aad ayey lagama maarmaan u tahay in la kobciyo caadooyinka akhrinta buugaagta carruurta inta lagu jiro carruurnimada. Zhu Yongxin, oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha waxbarashada iyo af-hayeenka qaran ee akhriska, mar uu wareysiga ku sheegay in si dhab ah loo xaliyo dhibaatada “dadka madaxa hooseeya”, waa inaan ka bilownaa da'da yar oo aan kobcinaa dhaqanka aqriska wanaagsan ee carruurta, gaar ahaan akhriska buugaagta warqadaha, kaas oo gacan ka geysanaya kobcinta u fiirsashada carruurta iyo awoodda fikir.
Baahida loo qabo buugaagta waxbarashada carruurta ee gudaha ayaa weli sii kordheysa
Marka loo eego "Warbixinta Suuqa Tafaariiqda Buugga Shiinaha ee 2017", wadarta guud ee suuqa tafaariiqda buugaagta ee Shiinaha sanadkii 2017 waxay ahayd 80.32 bilyan yuan, oo buugaagta carruurtu ka yihiin 24.64% dhammaan suuqyada tafaariiqda buugaagta, oo ka qayb qaadanaya in ka badan saddex-meelood meel iibka qaddarka. Afarta sano ee 2014 ilaa 2017, celceliska koritaanka wadarta iibka guud ee buugaagta carruurta wuxuu gaadhay in ka badan 50%, taas oo ay ku dhawaaqday warshadu inay tahay "xawaare aad u sareeya oo heer caalami ah". Waxaa jira in kabadan 500 oo guryo daabicis ah iyo in kabadan 470 buugaagta carruurta ah. Tirada buugaagta carruurta oo ka kooban 476,000 nooc ayaa ka badan tan Mareykanka, oo kaalinta koowaad ka gashay adduunka. dalkaygu wuxuu leeyahay suuq buugaagta carruurta oo aad u tiro badan oo gaadhaya 367 milyan oo aan qaan-gaarin, oo wadarta guud ee daabacaadda sannadkii ay ka badan tahay 800 milyan, in ka badan 300,000 oo nooc oo iib ah, iyo wadar iib ah oo ka badan 14 bilyan yuan.
Sida ku xusan warbixinta buugaagta buugaagta iyo waaxda madaddaalada ee Jingdong 2017, sida ku cad kororka sanadlaha ah ee koodhka iibka, buugaagta dhaqanka iyo waxbarashada ayaa kaalinta koowaad galay, buugaagta carruurta oo kaalinta labaad galay, iyo buugaagta suugaanta oo kaalinta saddexaad galay. Marka la eego tirada isticmaaleyaasha, tirada buugaagta carruurta ee 2015 ayaa gashay kaalinta afraad; sanadkii 2016, waxay gashay kaalinta labaad, kaliya waxay ka dambeysaa dhaqanka iyo waxbarashada, waxayna waxyar ka sareysaa buugaagta suugaanta; in kasta oo tirada buugaagta carruurtu ay sii waday in ay kaalinta labaad gasho sannadka 2017, haddana waxa ay la jaanqaadday qiimeynta Ta saddexaad ayaa ah in farqiga u dhexeeya tirada dadka isticmaala buugaagta suugaanta uu si tartiib tartiib ah u sii ballaadhay.
Sida ku xusan warbixinta xogta buugaagta caruurta ee 2017 oo ay soo saartay shirkadda ganacsiga e-commerce ee Dangdang, iyadoo lagu saleynayo 5 sano oo isku xigta oo heerka kororka Ma Yang oo ka badan 35%, Buugaagta Carruurta ee Dangdang waxay gaareen koritaan deg deg ah oo ah 60% sanadkii 2017, iyadoo wadarta iibka ee 410 milyan. Dhexdooda, saddexda qaybood ee tiirarka suugaanta carruurta, buugaagta carruurta ee sawirka, iyo cilmiga sayniska caanka ah ayaa sii waday koritaan joogto ah
Awoodda ballaaran ee suuqyada ayaa u oggolaatay in ka badan 90% guryaha daabacaadda ee dalka oo idil inay cagta saaraan qaybta daabacaadda buugaagta carruurta. Xilliga horumarka wanaagsan ee suuqa buugaagta carruurta gudaha ayaa daruur cusub ku soo biiriyay inta badan shirkadaha daabacaadda, taasoo u oggolaanaysa inay helaan dhibco kobcin ganacsi. Xaqiiqdii, fursadaha shirkadaha daabacaaddu kuma koobna kuwa gudaha. Iyadoo la raacayo hagida saxda ah ee siyaasadda "bixitaanka" dalka, shirkadaha daabacaadda sidoo kale waxay leeyihiin suuq ballaaran oo caalami ah.
“Baxayaa” Haloo Baxo Buugaagta Cunnooyinka Shiinaha
Buugaagta carruurta ee Shiinaha waxay soo mareen seddex marxaladood: "cidna dan kama lihi", "si tartiib tartiib ah loo fahmay loona aqoonsan yahay" iyo "koboc la taaban karo". Iyada oo aqoonsi caalami ah laga helay buugaagta carruurta Shiinaha, qaybaha buugaagta carruurtu u baxayaan way sii ballaadhan yihiin wayna ballaadhan yihiin, saamaynta ay adduunka ku leeyihiin ayaa sidoo kale sii kordheysa. Sanadihii la soo dhaafay, markii awoodda jilicsan ee dalku ay kordhay, daabacayaasha gudaha ayaa balaariyay aragtidooda iyagoo u maraya hordhaca buugaagta iyo ka qeybgalka carwooyinka caalamiga ah ee buugaagta. Isla mar ahaantaana, iyadoo la hagayo hindisaha "Belt and Road", buugaag badan ayaa loo dhoofiyay waddamada deriska ah ee "Belt and Road", tirada dadka baxaana si joogto ah ayey u sii kordheysaa.
Gelitaanka qarniga 21aad, suuqa buugaagta carruurta Shiinaha wuxuu ku koray celcelis ahaan sanadkii 10%, taas oo ka dhigan in ka badan 40% saamiga buugaagta, taas oo loogu magac daray "tobanka sano ee dahabiga ah" ee horumarinta buugaagta carruurta Shiinaha. Warshadaha madbacaddu waxay oggol yihiin in daabacaadda buugaagta carruurta ee Shiinaha ay ka bilaabmayso "tobanka sano ee dahabiga ah", waxaannu ka guureynaa waddan weyn oo buugaagta carruurta lagu daabaco oo loo wareejinayo waddan lagu daabaco buugaagta carruurta. Markay daabacaadda buugaagta carruurtu noqoto mid caalami ah, shirkado tiro badan oo daabacaad leh oo leh heerka daabacaadda buugaagta carruurta Shiinaha ayaa si tartiib tartiib ah u soo galaya suuqa dibedda iyagoo cagaha saari doona masraxa adduunka oo ay ka buuxaan rajo iyo loolan.